उपत्यकासहितका सहरमा पनि देखियो ‘ब्ल्याक फंगस’ | प्रदेश पालिका
गृहपृष्ठ देश उपत्यकासहितका सहरमा पनि देखियो ‘ब्ल्याक फंगस’
१८ जेष्ठ २०७८, मंगलवार ०७:४१
म्युकोरमाइकोसिस वा ब्ल्याक फंगस(कालो ढुसी)को संक्रमण देशका अन्य शहरहरुमा पनि देखिन थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले वीरगञ्जबाट देखिन थालेको यो संक्रमण बाँके, काठमाडौं लगायतका शहरमा देखिएको स्वीकार्छन् ।
वीरगञ्जमा वैशाखको तेस्रो साता ६७ वर्षीय एक पुरुषमा ब्लाक फङ्गस अर्थात कालो ढुसीको संक्रमण देखिएको थियो । तर अहिले १२ जना कोरोना संक्रमितमा यो संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी मन्त्रालयमा आएको उनले बताए । ‘वीरगञ्जमा देखा परेको यो संक्रमण अहिले काठमाडौंका अस्पतालहरुमा पनि देखिएका छन्,’ डा. पौडेलले भने, ‘त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा तीन जना, वीर अस्पतालमा दुई जना र नर्भिक अस्पतालमा एकजनामा यसको संक्रमण देखिएको सूचना पाएका छौं । बाँकेको भेरी अस्पतालमा पनि यो संक्रमण देखिएको खबर आएको छ ।’
यसैगरी बाँकेको भेरी अस्पतालमा तीन जनामा ब्ल्याक फंगसको संक्रमण देखिएको अस्पतालका प्रमुख फिजिसियन कन्सल्टेन्ट डा. राजन पाण्डेले बताए । ‘तीन जना कोरोना संक्रमितमा कालो ढुसीसँग मिल्दो लक्षण देखिएका थिए,’ डा पाण्डेले भने, ‘दुई जनाको उपचार प्रक्रिया नथाल्दै मृत्यु हुन गयो । एकजनालाई भने काठमाडौं रेफर गरिएको थियो ।’
अस्पतालमा फंगसको परीक्षण नहुने भएकाले औपचारिक पुष्टि भने हुन नसकेको डा. पाण्डेले बताए । भारतको महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरातलगायतका शहरमा ९ हजार भन्दा बढी कोरोना संक्रमण निको भएका व्यक्तिहरुमा ब्ल्याक फंगसको संक्रमण देखिएको थियो ।
डा. पौडेलका अनुसार पछिल्लो समय हप्तामा कालो ढुसीका दुई÷तीन वटा केस देखा परेका छन् । यसले के संकेत गर्छ भने आगामी दिनमा कालो ढुसीको संक्रमण बढ्दै जाने सम्भावना प्रवल छ । स्टेरोइड तथा एन्टिबायोटिक औषधि सेवन गरेका गम्भीर प्रकृतिका कोभिडका बिरामीहरु संक्रमणमुक्त भएपछि कालो ढुसीको संक्रमण देखा पर्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।
संक्रमितको स्वाबको माउन्ट गरेर माइक्रोस्कोपिक टेस्ट गरेर यो रोगको पहिचान गर्न सकिने उनले बताए । यसै गरी कल्चर टेस्ट तथा बायोप्सी परीक्षणमार्फत पनि यो रोगको पहिचान गर्न सकिने डा. पौडेलको भनाइ छ । माइक्रोस्कोपिक टेस्ट र बायोप्सी टेस्ट काठमाडौं बाहिरका ल्याबमा पनि गर्न सकिने उनको भनाइ छ । तर कल्चर टेस्ट भने काठमाडौंको केही अस्पतालमा मात्र सम्भव रहेको उनको भनाइ छ ।
कालो ढुसी प्राकृतिक रूपमै हाम्रो वातावरणमा पाइने एक प्रकारको ‘अपरट्यूनिस्कि’ ढुसी हो । बढी ओसिलो ठाउँमा कालो ढुसीको संक्रमण हुने जोखिम बढी हुने हुन्छ । त्यसैले डा. पौडेलको सुझाव छ, भिजेको वा चिसो मास्कको प्रयोग नगर्नुस् । एउटै मास्क २–३ पल्ट प्रयोग गर्ने बानी तत्काल त्याग्नुपर्ने डा. पौडेलको भनाइ छ ।
लामो समयसम्म स्टेरोइड औषधि प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरुले चिकित्सको सल्लाहबमोजिम मात्रै कन्ट्रोल गरेर सेवन गर्न पनि उनले सुझाव दिए । आफ्नो इच्छा अनुसार औषधि सेवन गर्ने बानीलाई डिस्करेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कोर्निया विशेषज्ञ डा. गुरुङले हाम्रो वरपरको वातावरणमा कालो ढुसी हुने भन्दै जोकोहीलाई यसले आक्रमण नगर्ने बताउँछिन् । कोभिड महामारीको समयमा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले स्टेरोइड औषधि सेवन गर्दा रोगसँग लड्ने क्षमता घट्दा यसको संक्रमण हुने उनले बताइन् ।
कालो ढुसीबाट संक्रमितको उपचारमा मुख्यतया ‘एम्फोटेरिसिन बी’ औषधिको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेलका अनुसार कालो ढुसीका संक्रमितले दुई÷तीनवटा एन्टिफंगस औषधि प्रयोग गरिन्छ ।
सरकारको कस्तो छ तयारी ?
पछिल्लो समय कालो ढुसीको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकार औषधिको जोहो गर्नतर्फ लागेको छ । एन्टिफंगस औषधि ल्याउनका लागि डब्लूएचओसँग समन्वय भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेलले बताए ।
‘डब्लूएचओको सिस्टमबाट औषधि ल्याउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘जुन ३ वा ५ तारिखभित्र यो औषधि नेपाल आइसक्छ ।’ नियमित हवाई उडान नभएका कारण औषधि आउन ढिलाइ भएको उनले बताए ।
उनकाअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत १० हजार भाइल उपलब्ध गराउन भनिएको थियो । तर डब्लूएचओले पहिलो लटमा ३ हजार भाइल उपलब्ध गराउँदैछ । उनले भने, ‘एक हजार भाइल त कालाजारका बिरामीका लागि नियमित आउँदै गरेको सेड्यूलमा छँदैछ । तीन हजार एडिसनल आउँदा तत्कालका लागि हामीलाई अलिकति राहत मिल्छ ।’
Previous articleधनगढीमा २५ शैय्याको सैनिक अस्पताल सञ्चालनमा
Next articleफ्रान्सबाट १० वटा अक्सिजन प्लान्ट ल्याउन प्रक्रिया सुरु
मोतीपुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा एक जना पक्राउ